Xogtaada iCloud uma guuri doono Shiinaha, waa qalad ay xaqiijisay Apple | Waxaan ka socdaa mac
Ka shaqeynta xogta shakhsiga ah, iyo sidoo kale macluumaadka aan ku hayno daruurta, waa arrin xasaasi ah. Aniguna ulama jeedo si gaar ah ilaalintooda, marka lagu daro asturnaanta, waa inay buuxisaa shuruudo gaar ah oo dal walba dejiyay. Waxaa lagu xukumaa xeerarka maxalliga ah sidaa darteedna xogteennu meelna kama ahaan karto.
Toddobaadkan, Apple waxay shaacisay in macluumaad gaar ah oo ka socda iCloud iyo adeegyada ku yaal Shiinaha loo wareejiyay GCBD, yaa maamuli doona xogta galbeedka Shiinaha. Taasna, Apple waxay u hoggaansantaa qawaaniinta ay dejisay dawladda hoose. Laakiin si qalad ah isgaarsiintaani waxay gaartay macaamiisha iCloud ee adduunka.
Macluumaadka wuxuu ka yimid TechCrunch , taas oo muujineysa in dhowr isticmaale oo Apple ah, oo aan kaliya ka aheyn Mareykanka, ay xiriir ka heli lahaayeen Apple. Tani waxay walaac ku abuurtay qaar ka mid ah dadka isticmaala, kuwaas oo ku andacoonaya in xogta aan si adag loo ilaalin doonin.
Laakiin dhowr saacadood ka hor, Isticmaalayaashan ayaa e-may ka helay Apple, iyagoo ku wargelinaya inay si qalad ah ku heleen fariinta. E-maylku wuxuu muujinayaa in xogtaada aan loo gudbin doonin Shiinaha, fariintanina waxaa si qalad ah loogu diray dhawr isticmaale.
Dhawaan waxaad heshay email kuu sheegaya isbedelka soo socda ee adeegyadaaga iCloud ee Shiinaha. Emailkan waxaa loo soo diray si qalad ah Wax isbedel ah laguma sameyn xisaabtaada iCloud.
Aad iyo aad ayaan uga xunahay inaad heshay emailkan. Emailkan waxaa loogu talagalay kaliya macaamiisha waddankoodu ka diiwaan gashan yahay Apple ID waa Shiinaha. Tiro yar oo ka mid ah macaamiisheenna oo waddankoodu ka diiwaangashan yahay Apple ID ma aha Shiinaha, ayaa iyaguna si khalad ah ku helay emaylkan
Ma ahan markii ugu horreysay ee Apple ay tahay inay bedesho halbeeggeeda aasaasiga ah, iyadoo la qabsanaysa heerarka Shiinaha. Laakiin waddan kastaa wuxuu leeyahay astaamihiisa waana inaad adigu la qabsataa. Mid ka mid ah tusaale ahaan wuxuu ahaa markii Apple ay ahayd inay tirtirto barnaamijyada u oggolaanaya isku xirka VPN-yada dibadda. Tani waxay abuurtay arrin kacsan
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Xogtaada iCloud lama guuri doono Shiinaha, tani waa cayayaan ay xaqiijisay Apple